I-Semalt: Izindlela Ezinhlanu Zokufaka I-SEO Analysis Yakho Nge-Web Scraping
I-Inthanethi igcwele iseluleko ku-SEO. Nge-11 (ama-web scrap ing, kungenzeka ukuguqula amawebhusayithi ethu omncintiswano ukuze ahlele amasu okuwahambisa ngaphandle. Kungakhathaliseki ukuthi udinga ithegi yombhalo, izincazelo ze-meta noma amagama angukhiye, kufanele usebenzise okuqukethwe okulungile okuqukethwe ukuze wenze umsebenzi wakho ufezeke - portable grain handling equipment.
Nazi izindlela ezi-5 ezihlukene zokwenza ukuhlaziywa kwe-SEO yakho nge-web scraping.
1. Ukuhlaziywa kwegama elingukhiye lomncintiswano:
Ungakwazi ukusula kalula iwebhusayithi yakho yomncintiswano bese uthola okuqukethwe kwayo ngokuhlaziywa kwegama elingukhiye. Ngalokhu, ungasebenzisa i-SEMRush bese usesha amagama angukhiye afanelekayo. I-SEMRush iyithuluzi eliphelele lokukhipha idatha ithuluzi. Ngalo, ungathola ukuthi yimiphi amagama angukhiye abasebenzisi bakho abasebenzisayo. Futhi, ungathola amagama akhe angukhiye omsila omfushane nomsila futhi uthole isayithi lakho libekwe ngendlela engcono.
2. Ukusebenza kwamakhasi:
Amathuluzi ahlukahlukene we-SEO namasevisi agxila ezizindeni namagama angukhiye amanani angcono. Kubalulekile ukuthi uqoqe idatha ukuthuthukisa ukusebenza jikelele kwamakhasi akho wewebhu. Ingabe ufuna ukushayela ithrafikhi engaphezulu kuwebhusayithi yakho noma kubhulogi? I-Google Adwords API iyithuluzi elihle kakhulu elisha idatha futhi likhahla amakhasi akho wewebhu kalula. Futhi, kusiza ukuthuthukisa ukusebenza kwewebhusayithi yakho futhi kuthuthukise simo sayo.
3. Ukukhishwa kwe-Meta-Data:
I-Kimono Labs ne-Import. Io yizinto ezimbili ezivelele zokuhlunga iwebhu webhubhu . Basiza ukukhipha idatha ye-meta futhi babhale amakhasi ethu wewebhu kalula. Uma ufuna ukuthola ukuthi kungani isayithi lakho lomncintiswano libeka kangcono kunakho, ungazama noma yikuphi kulawa mathuluzi futhi uthole amagama angukhiye afanelekayo esayithi lakho. Ngenisa. Io no-Kimono, ungakwazi kalula ukukhipha izincazelo ze-meta, izihloko ze-meta, namathegi we-meta futhi zingathuthukisa ukusebenza kwewebhusayithi yakho.
4. Izingosi ze-Scrape zekhasi:
Umgomo we-SEO ukwandisa isikhundla sekhasi ngamagama angukhiye anikeziwe. Bonke abaphathi bewebhu badinga i-SEO i-web scraper engabasiza ukuba bathuthukise ukusebenza jikelele kwamasayithi abo. Uma idatha idutshulwa ngokugcwele, ungayishicilela kubhulogi yakho bese uyihambisa ithrafikhi yekhwalithi kuyo. Ungase uzame i-Scrapy, ithuluzi lesitoreji sedatha elisha ulwazi oluvela kumawebhusayithi ahlukene ngaphandle kokushintsha amagama akho angukhiye. Enye indlela yokwandisa i-rankings ukuthola ukuthi yiziphi izincintisana zakho ezenzayo futhi zilandele amawebhusayithi abo.
5. Izixhumanisi zangaphakathi nezi zangaphandle:
Kuphephile ukusho ukuthi ukubhula iwebhu ne-SEO banesibopho esiqinile. Udinga njalo izixhumanisi zangaphakathi nezangaphandle zokusezingeni eliphezulu lokusesha injini. Nge-Getleft, i-ParseHub ne-OutWit Hub, awukwazi nje ukukhahla futhi ukhiphe amakhasi akho wewebhu kodwa futhi wakha izixhumanisi eziqinile zangaphakathi.
Ngamathuluzi we-web scraping, ungakwazi ukunquma kalula ukuthi mangaki amagama angukhiye isayithi lakho lomncintisisi elisetshenzisiwe. Kumelwe kube nenani eliphezulu lamagama angukhiye kokuqukethwe kwakho, futhi lingasiza ukugwema ukugxila igama elingukhiye. Ngaphezu kwalokho, ungayifaka idatha ewusizo kusuka kumavidiyo nezithombe. Ngomuthi ofanele wokuhlunga amathuluzi , ungakwazi kalula ukukhipha ulwazi kusuka ezithombeni nakumavidyo kliphu futhi ungathuthukisa amazinga akho ngezinga elithile. Ngamafuphi, ukukhipha iwebhu kanye ne-SEO kungasiza ekuqondeni ukuthi umncintiswano wakho uthola kanjani phezulu imiphumela yemiphumela yokusesha.